Resaka 3 tapitrisa Ar Novonoina sy nalevina an-tsokosoko ilay ramatoa
Tany Ampanihy Andrefana no nisehoan’ity tranga ity. Araka ny fitantarana nataon’ny Sampan-draharaha misahana ny serasera na ny DRCC Atsimo Andrefana, dia nindram-bola 3 000 000 Ar
tamin-dRtoa Vero ny Rtoa Mpampivelona tsy miankina amin’ny fanjakana antsoina hoe Tatamo. Rehefa takiana dia mangata-potoana lava foana, ka ny zoma teo dia nifankahita an-dalana izy roa, ka nasain’ilay ananana haka ny volany any an-tranony Rtoa Vero, hoy ny fampitam-baovao. Nanomboka teo dia tsy hitan’ny fianakaviana Rtoa Vero. Rehefa nanontanian’ny zandary ilay ramatoa mpampivelona, dia milaza ny tsy nahita izay nalehany. Ny sabotsy alina anefa dia nisy nahita ny mpifanolo-bodirindrina amin-dRtoa Tatamo fa nanganady lavaka tamin'ny andro alina izy, ka nisy nilaza an’izany tamin'ny fianakavian-Rtoa Vero. Nanao fangatahana tamin'ny manam-pahefana ny hanao fisavana ny tranon-dRtoa Tatamo ny fianakaviana. Tsy nahitana na inona na inona. Nohadiana amin'izany ny lavaka akaiky ny tranony, ka hita nihohoka tao anaty lavaka ny fatin-dRtoa Vero. Nosamborina Rtoa Tatamo hialana amin'ny fitsam- bahoaka , ary efa eo am-pelatanan’ny zandary izy sy ny iray voalaza fa niray tsikombakomba taminy, hoy ny vaovao azo.